Banaan baxyo waaweyn oo ka socoda dalka Pakistaan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Banaan baxyo waaweyn oo ka socoda dalka Pakistaan.
On Nov 26, 2017 291 0
Waxaa maalmo xiriir ah dalka Pakistaan ka socoda banaanbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan dadka Muslimiinta ah, kaas oo oo looga soo horjeedo dowladda dalkaas ka arimisa, oo aflagaado iyo meel ka dhac ku sameysay Nabigeena Muxamed SCW.
Banaanbaxyada ugu badan waxay ka socodaan magaalada caasimadda ah ee Islam-Abad, waxaana ka qeyb galaya kumanaan ruux, kuwaas oo kasoo horjeedo wasiiirka cadaaladda ee xukuumadda Pakistaan oo shaki geliyay in Nabi Muxamed SCW uu yahay nabigii ugu dambeeyey ee Alle uu soo diro.
Dadku waxay dalbanayaan in wasiirkaas meesha laga saaro, islamarkaana wuxuu mudanyahay la marsiiyo.
Ciidamada Booliiska iyo kuwa la dagaalanka amni darada ayaa ku guul dareystay iney kala eryaan dadka banaanbaxyada dhigaya, waxaana wakaaladda wararka ee Reuters ay soo warineysaa in hal Askari oo Booliis ah la dilay, iyadoo 145 Ruux oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen.
Booliisku waxay u taag la’yihiin kala eryinta dadka, waxayna noqdeen kuwa gacan ku gambad ah oo la kulmaya iska caabin uga imaaneysa dadka banaan baxyada dhigaya.
Dowladda Pakistaan ayaa milliteriga waxay ka codsatay iney soo fargeliyaan arinta, oo ay ka qeyb qaataan kala eryinta dadka dibad baxyada dhigaya.
Wasiirka Cadaaladda xukuumada Islam-Abad ayaa isagoo raalli gelinaya qowmiyad lagu magacaabo Qaadiyaani oo aan Islaam ahayn, kuna nool dalka Pakistaan ayaa wuxuu doonayaa in dastuurka dalkaas laga saaro qodob qeexaya in Nabi Muxamed SCW uu yahay rasuulkii ugu dambeeyey ee dhanka Alle laga soo diro, waana mida keentay carada dadka muslimiinta.